सिभिल बैंकले हार्यो सवा ५ करोडको राजश्व मुद्धा, यस्तो थियो राजश्व न्यायाधिकरणमा पुगेको केस !
ARCHIVE, BANKING, SIFARIS » सिभिल बैंकले हार्यो सवा ५ करोडको राजश्व मुद्धा, यस्तो थियो राजश्व न्यायाधिकरणमा पुगेको केस !
काठमाडौँ- ठूला करदाता कार्यालयले निर्धारण गरेको करमा असन्तुष्टी जनाउँदै राजश्व न्यायाधिकरण पुगेको सिभिल बैंकले ५ करोड २५ लाख रुपैयाँ बराबरको राजस्व मुद्दा हारेको छ । आर्थिक वर्ष २०६८/०६९ को आयकार ५ करोड २५ लाख ३७ हजार १ सय २४ रुपैयाँ बढी कर लगाएको दाबी गर्दै बैंकले राजश्व न्यायाधिकरणमा मुद्दा दायर गरेको थियो। विभागले ६० दिनभित्र गर्नुपर्ने निर्णय समयमै गर्न नसकेपछि २०७३ भदौ १ गते पुनरावेदनको लागि राजस्व न्यायधिकरणमा सिभिलले मुद्दा लिएर गएको थियो । न्यायधिकरणको फैसला सरकारकै पक्षमा आयो । सिभिल बैंक हार्यो ।
यसो त यसरी कर बढी भयो भन्दै राजश्व न्यायाधिकरण जाने बैंक सिभिल एक्लो भने होइन । थुप्रै बैंकका थुप्रै केसहरु अझै पनि फैसला हुन सकेको छैन । सबैभन्दा बढी मुद्दा दायर गर्नेमा प्रभु बैंक (१३) र एनसीसी बैंक (१०) रहेको छ । यस्तै प्रभु बैंक, मेगा बैंक, लक्ष्मी बैंक, एनसीसी बैंक, नबिल बैंक, माछापुछ्रे बैंक, सानिमा बैंक, ग्लोबल आइएमइ लगायतले न्यायाधिकरणमा मुद्धा दर्ता गराएका छन् ।
प्रकाशित : Friday, November 30, 2018
Tags : ARCHIVE, BANKING, SIFARIS